“ Tany Ampanefena, distrika Vohémar, faritra Sava, nisy fiahiana ny mety ho fitanilana amin’ny fikarakarana ny fifidianana . Nandray fepetra ny mpitandro filaminana any an-toerana ka natevenina avy hatrany ireto farany ho amin’ny fisafoana. Nanao ny fanadihadiana ny tompon’andraikitra tany ifotony. Tsy nahitana porofo ny amin’izany hatreto fa nanatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy ny tomponandraikim-panjakana any an- toerana. Tsy misy fanohintohinana ny fandatsaham-bato sy ny zotram-pifidianana. Raha misy milaza fa misy solontenam-panjakana nitondra vola tany an-toerana, tsy misy ifandraisany amin’ny fanelingelenana sy ny fitanilan’ny fikarakarana fifidianana ary ny fandikana velively izany.” Araka ny tafa manokana tamin’ny Kolonely Zafisambatra Ravoavy teo biraony Andrefan’Ambohijanahary, omaly. Tamin’ny fotoana nanoratana ny vaovao nandritra ny fifidianana anefa voamarina, araka ny vaovao marim-pototra fa tsy tany Vohémar io lehiben’ny Distrika io fa tany Andapa. Etsy an-daniny anefa loharanom-baovao hafa no nilaza fa saika hizara ny karaman’ny sefo fokontany izy io andro mialohan’ny fifidianana ka niteraka ahiahy.